Global Voices teny Malagasy » Iran: Fanoherana maneran-tany ny fitoraham-bato · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Aogositra 2010 15:06 GMT 1	 · Mpanoratra Fred Petrossian Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Fanoherana, Lalàna, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Ny mpisolovava azy, Mohmmad Mostafai, milaza fa  ny antso avo natao erantany momba ny fanamelohana ho faty dia mety ho ampy hanavotana azy tamin'ny famonoana. Vao haingana dia nandositra an'i Iran i Mostafai ary monina any Norvezy ankehitriny, ka tany no namoahany ny raharaha tany anatin'ny aterineto sy ny gazety iraisam-pirenena.
Indrisy fa tsy tranga naningana akory ny an'i Sakineh any Iran. Raha ny ambaran'ny gazety an-tsoratra Frantsay, Le Figaro , mbola misy amin'izao fotoana izao lehilahy sy vehivavy telo voaheloka hotoraham-bato any amin'ireo fonja Iraniana.
Ny Komity Erantany manohitra ny Fitoraham-bato dia namoaka  lisitra lavabe misy ireo olona notoraham-bato tany Iran tato anatin'ny 30 taona farany.
Ilay Iraniana mpitoraka blaogy, Talelesiyasat, manoratra  [fa]:
Sahargahan izay namoaka ny sary ery ambony, dia nifidy  ny “Fitoraham-bato na ilay heloka bevava masina” ho lohatenin'ny lahatsorany. Ilay mpitoraka blaogy, izay manohitra ny mety ho endri-panamelohana ho faty rehetra, dia miteny fa ny fitoraham-bato no faran'izay ratsy indrindra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/08/23/8444/
 milaza fa: http://www.huffingtonpost.com/2010/08/18/sakineh-mohammadi-ashtian_1_n_686920.html
 dia namoaka: http://stopstonningnow.com/wpress/1812
 izay namoaka ny sary ery ambony, dia nifidy: http://msahar.blogspot.com/2010/08/blog-post_13.html